Kedu otu esi echekwa ngwaahịa m na Amazon maka oke ahịa?
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ịzụ ahịa na-arụ ọrụ na-aga nke ọma na usoro ọ bụla a na-ahụ maka mgbasa ozi, ọ bụ ihe kachasị mma ahịa nke ndị ahịa na-achọ n'ebe ahụ. Ndepụta ngwaahịa gị na Amazon abụghị nhepu na iwu a. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu esi edozi njikarịcha SEO kwesịrị ekwesị site na ntụziaka dị mfe site na ntụziaka.
Nchọpụta Okwu maka Ndepụta Ngwaahịa na Amazon
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị chee ihu na ya - dị ka ọ dị na usoro nke usoro nyocha njikarịcha (SEO), njirimara Amazon maka ọchụchọ ngwaahịa amalite site n'inyocha ihe omimi nke omimi. Ana m ekwukwa na ebe a na-arụ ọrụ na Google's Keyword Planner Tool. N'ụzọ dị otú ahụ, ị ​​ga-ahụ nnukwu foto nke ụdị ngwaahịa gị ma ọ bụ nchịkwa ahịa, yana okwu ọchụchọ bụ isi na okwu ogologo oge nke ndị na-azụ ahịa na-abụghị nanị na Amazon ma eleghị anya onye ọ bụla na-enyocha Google search engine n'ụwa nile . Ihe na-esote bụ isiokwu gị nke isiokwu kpọmkwem ahaziri maka ndepụta ngwaahịa SEO na Amazon. Enwere m ike iji ebe a na-eme nchọpụta nke isiokwu ndị a na search engine ngwaọrụ, dị ka AMZ Tracker, Ihe Omume, Ahịa ahịa, ma ọ bụ Onye Ọkà Mmụta Sayensị. Enwere ike ịhọrọ nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị ahụ dị n'elu, dịka ngwá ọrụ ọ bụla nwere ọrụ bara uru nke bara uru iji nyere gị aka iji aka nchịkọta nhọrọ zuru oke.
Optimization SEO maka Ndepụta Gị na Amazon
Nke a bụ otu ị ga-esi bulie ngwa ngwaahịa gị iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị - inweta ọkwá na Amazon maka okwu nke ire ere dị mkpa. I kwesiri ilekwasị anya n'isiokwu ndị a nke ndepụta gị: Ahịa Ahịa, Ndepụta Ihe Mbụ, na Nkọwa Ihe. N'okpuru ebe a, m ga-enwe nkọwa dị mkpirikpi maka nke ọ bụla.
Aha isi nke nchịkọta ngwaahịa gị na Amazon bụ kpọmkwem ebe ị na-ezube itinye ọtụtụ isiokwu dị iche iche ma na-ejikarị mkpụrụ okwu ọchụchọ mee ihe dị ka o kwere mee. Ma, rịba ama, na ị gatụghị emebiga ihe ókè site n'inwe ọtụtụ mkpụrụ okwu jupụtara n'ebe ahụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị chọghị ka a mara omume gị dịka ịgba afa ma ọ bụ mgbalị ndị ị na-eme iji mee ka ị daa mbà (ọnọdụ kachasị njọ)..Ya mere, tụlee aro ndị na-esonụ iji nweta aha akara ngwaahịa SEO-kachasị mma n'ụzọ kachasị mma:
A na-atụ aro ka ị nọrọ n'ime 200 ma ghara inwe ihe odide ogologo oge.
Akwụkwọ edemede ọ bụla nke okwu aha ọbụla kwesịrị ịbụ isi.
Naanị nọmba edepụtara na nọmba ole na ole ka a na-enye maka nchịkọta ngwaahịa (eg, asatọ na ọ bụghị 8).
Adịnyela ihe ma ọ bụ agba, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị mkpa.
Ndepụta nke Mpempe akwụkwọ
Ụdị njirimara nke ihe ahụ kwesịrị ịdị ọcha ma doo anya dịka o kwere mee.
Ọ na-akọwa njirimara pụrụ iche nke ngwaahịa ahụ na ihe ndị kachasị emetụta ihe eji eme ihe kwa ụbọchị.
Na-egosipụta isi atụmatụ na uru nke ihe ahụ.
Ihe ọ bụla ọzọ a ga-egosipụta na igbe ahụ.
A ghaghị ekpuchi ozi niile dị oke egwu banyere ngwaahịa a n'enweghị ihe mgbochi.
A ghaghị ilebara isi ihe mgbu nke ndị ahịa anya.
A na-atụ aro nkọwapụta ngwaahịa ka a kwadoro nke ọma maka okwu mkpokọta ogologo, na ihe gbasara LSI ngwa ngwa na okwu ndị dị mkpa na ụdị ihe ma ọ bụ niche.
Ihe odide dị iche iche na ihe odide mbụ nke ederede gbasara ihe dị mkpa nke ngwaahịa bụ MUST Source .